Nazi izindawo ezine zokuhlola i-asteroid yezindawo ezine ezingahlala kuzo - i-BGR - Tamban RELAY
Accueil » ISAYENSI Nazi izindawo ezine lapho iprojekhthi yemvelo yeNASA ingangena khona - i-BGR
Nazi izindawo ezine lapho iprojekhthi yemvelo yeNASA ingangena khona - i-BGR
I-spacecraft ye-NASA's OSIRIS-REx njengamanje isazungeza i-asteroid eyaziwa ngokuthi iBennu. Sekuyizinyanga, kuthatha izithombe futhi kushafa ingaphezulu le-asteroid ukuthola umbono ongcono wobungozi umproyi ongabhekana nabo lapho ekugcineni ushaya umhlabathi.
Manje, ngemuva kokuskena yonke intshi yesikwele yaleli dwala elikhulu, i-NASA isinciphise kumasayithi okungenzeka abekwe kuwo kubafundi abane kuphela . Indawo ngayinye yalawa amane ibukeka kahle, inempahla emincane embalwa, kodwa ithimba lesayensi lisenomsebenzi okufanele liwenze ngaphambi kokuthi likwenze ucingo lokugcina.
Ngenkathi kwethulwa okokuqala lo msebenzi, abakwaNASA bacabanga ukuthi izinto zihamba kahle. ukuthuthuka ngokushesha kunalokho abakwenza. Ngenkathi umphenyi efika eBennu, wathola ukuthi i-asteroid empeleni "yayididekile" kunokuba umuntu ayengayicabanga, njengoba imfucumfucu yagcwala yonke indawo. Lokhu kube yinkimbinkimbi yokufuna isiza sokuxhumana esifanele.
Umgomo wokugcina bekulokhu ukubuyisa amasampula wezinto ze-asteroid futhi uwuthumele emhlabeni. Kunzima ukukhetha ukuthi ungasithatha kuphi lesi sampula ngenxa yezidingo zohlelo lokuqoqa isampula le-spacecraft. Izinto ezibonakalayo kumele zibe zincane kune-intshi eyodwa, uma kungenjalo iphenyi ngeke likwazi ukukuthola, kepha amasayithi amane wokufika angabonakala enikeza into efanelekile.
"Besazi ukuthi uBennu uzosimangaza, ngakho-ke sikulungele konke esingakuthola," kusho umphenyi omkhulu we-OSIRIS-REx uDante Lauretta esitatimendeni. "Njenganoma yimuphi umsebenzi wokuhlola, ukubhekana nokungaziwa kudinga ukuguquguquka, izinsiza kanye nobuhlakani. Ithimba le-OSIRIS-REx likhombise lezi zici ezibalulekile ukunqoba okungalindelekile ngesikhathi somhlangano noBennu. "
Ukusuka lapho, iqembu lizonciphisa ukukhetha kube kabili, bese indiza phezu kwenkundla ukukhetha isampula lokuqoqa isampula. . Lokhu kuqondisa ngeke kwenzeke kuze kube unyaka olandelayo, kanti futhi ukubuyela endizeni eMhlabeni kuzothatha eminye iminyaka emithathu, ngakho-ke ngeke sithole noma yiliphi iBennu asteroid bit ngaphambi kokuphela konyaka we-2023 ekuqaleni.
Singathola maduze ukuthi ngabe umhlaba-onjengomhlaba ojikeleza iTRAPPIST-1 ungakusekela impilo - BGR